13 oche Embraer Hapụrụ 650 Aircraft Aviation Interior Review Private Jet Air Charter Flight Service maka azụmahịa ma ọ bụ onye ụgbọelu Rental Company m nso maka gị ọzọ njem ebe on ufọt ufọt size deadhead pilot efu ụkwụ quote nọ n'ógbè gị.
Mgbe ọ na-abịa irenti jets na e nweghị ụkọ nhọrọ. Otu na-ewu ewu nhọrọ bụ Embraer Hapụrụ 650 ugboelu ugbo elu. Nke a Embraer Hapụrụ 650 ugboelu ugbo elu nyochaa ga-akwatu ihe mere ọtụtụ uloru na ndị ọzọ na-ichata flights họrọ a akpan akpan ụgbọelu maka onwe ha flights.
The Embraer Hapụrụ 650 bụ nnọọ ezigbo okomoko na style. Ọ nwere atọ dị iche iche cabins na ụlọ maka ruo 14 njem. Nke a ugboelu nwere ọtụtụ ụlọ ohere na ya na klas na ya na-abịa na a credenza, a full wardrobe, na a 134 cubic ụkwụ lavatory (bụkwa ndị kasị ibu na ya na klas).
The Embraer Hapụrụ 650 nwere ndị fọdụrụ n'ezinụlọ akwụkwọ ikike na ndị ụlọ ọrụ na 10 afọ ma ọ bụ 10,000 ụgbọ elu awa. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahịa nkwado otu ifịk 24/7, na e nwere ihe karịrị 70 ọrụ emmepe gburugburu ụwa na-raara onwe gị na ugboelu. Nke a bụ ihe mere Embraer e họọrọ #1 na ahịa nkwado oge na oge ọzọ, na nke a bụ ya mere na e nwere ugbu a n'elu 1,200 ndị a jets na ọrụ a jikọrọ 26 nde kilomita bubatara.
Low Operating Akwụ ụgwọ
Embraer Hapụrụ 650 aerospace onwe ugboelu ichata flights nwere ụfọdụ ndị kasị ala na-arụ ọrụ na-akwụ ụgwọ na ụwa. Nke a na elu itinye n'ọrụ ugboelu eji mmanụ ụgbọala oru oma engines na ụgbọelu si imewe pụtara na ọ nwere mmezi akwụ ụgwọ na-na par na ndị nke ọtụtụ abụọ na-ụlọ ugbo elu. Na a nso nke 3,900 -amụ ka kilomita (anọ njem) na a payload ikike nke fọrọ nke nta 5,000 pound ọ dị mfe ịhụ ya mere ọtụtụ uloru họrọ a ugboelu nanị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a pụrụ ịdabere na saa mbara ugboelu na-eme ka njem pụrụ iche na-enye ha ohere na-arụ ọrụ comfortably mgbe ahụ Embraer Hapụrụ 650 bụ a siri ike nhọrọ. Ọ na-agwakọta okomoko, pụrụ ịdabere na ala-arụ ọrụ na-akwụ ụgwọ na-enye ọrụ na a ugboelu na arụ ọrụ dị ukwuu ma ị na-eji ya maka azụmahịa ma ọ bụ obi ụtọ.
EMBRAER Jet Hapụrụ 650 Interest karịrị oge:
EMBRAER ụgbọelu Hapụrụ 650 Interest site Subregion
Instagram: EMBRAER 750 Hapụrụ 650 Jet ugbo elu Interior
Embraer Hapụrụ 650 Aircraft Aviation okomoko Interior Private Jet Charter Flight Service #emptyleg #Jetcharter #emptylegs #wysluxury #Embraer # EmbraerLEGACY650Jetairliner # EmbraerLegacy650 # EmbraerLegacy650seating # EmbraerindustrieLegacy650 #Legacy 650Embraer #Luxuries #lifestyle #traveler
A post na-akọrọ site WysLuxury JetCharter (@wysluxury) on Dec 10, 2017 na 6:53pm PST